ကြာပီ: ဂန္တ၀င် မြန်မာသီချင်းများ
ခင်မင်းဇော် | April 23, 2008 at 4:17 PM
ကြာပီ | April 24, 2008 at 3:46 PM
အစ်မရေ မေးထဲကို ပို့လိုက်ပီနော်။
လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ စာမရေးတာ အရမ်းကြာသွားလို့ လာဖတ်တဲ့သူ မရှိဘူးထင်နေတာ။
တေးအေးရိပ် | April 29, 2008 at 10:31 PM
ညည်းကတော့အေ.. အခုမှ ကျုပ်ကို သတိရတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား..
မေးစရာရှိတာကို အီးမေလ်ထဲ ပို့ ပြီးမေးအေ့..
ညည်း အငြိမ်းစား ရထားတယ်လို့ ဖိုးချမ်း ဆီက ကျုပ်ကြားပါတယ်အေ့
jimmy | May 12, 2008 at 6:28 PM
kyun daw ko lea (Ko Ank Gyi ) Thee Chin lay po pay per ohne khin byar ,Kyee Zu Tin per dea. jimmylou9@gmail.com
Zin+Aye's peaceful square | June 21, 2008 at 5:59 AM
လာလည်ပါတယ်ဗျို့ ။ မိသားစုတွေ ကျန်းမာကြတယ်မဟုတ်လား
mm thinker | June 24, 2008 at 5:27 AM
ကျုပ်ဆီမှာ ဆင်ကြီး ဂဠုန်ချီတော့ရှိတယ်။
ပြီးတော့ ယောဆရာတို့ ဘာတို့ ရှေးသီချင်းတွေလည်း ရှိတယ်ဗျို့
mm thinker | June 24, 2008 at 5:28 AM
ကြာပီ | July 17, 2008 at 8:44 PM
ကိုဂျင်မီ-စာပြန်တာနောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ မေးထဲကို ပို့ထားပြီးပါပြီ။
ကိုသင့်ကာ- ကျွန်မဆီမှာလည်း ဆင်ကြီးဂဠုန်ချီက ရှိတော့ရှိတယ်။ ကွာလတီမကောင်းပါ။ နေးတစ်က ရထားတာပါ။ယောဆရာတော့ လိုချင်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
ကိုဇင်အေး-အားရင် အိမ်လာလည်ပါအုန်း။ မတွေ့တာကြာပီ။ ကြာပီလည်း ဒီလိုပဲ လုံးချာလည်ချာလိုက်ရင်းပဲ။
Aye Myat Myat Ko | September 30, 2008 at 1:16 PM
ကျွန်မ "သခွပ်ပန်း" သီချင်း လိုချင်တာရှင်...
ဘယ်သူ့ version ဖြစ်ဖြစ်ပါ..
ပြီးတော့ "ပါရမီတော်" သီချင်း...
thomas | October 2, 2008 at 4:52 PM
Firstly I would like to express my sincere Big Thank to you for the Burmese songs link.
Ko Saw Nyein's songs were my remedy for most of my psychological pain since I was young and I haven't listen those for more than two decades and tonight tear are coming out from my eyes with joy.
If someone can send me any Ko Saw Nyein's songs, I really appreciated.
P.S: Sorry for not communicating in Burmese cause I don't know how to.
ကိုမိုးစွေ | November 11, 2008 at 6:40 AM
ကျွန်တော်က အခုမှ တွေရတာပါ။
ပန်းပန်လျှက်ပါနဲ့ ကိုအံ့ကြီးရဲ့ အောင်ပင်လယ် သီချင်း ကိုလိုချင်ပါတယ်။
umaung | January 15, 2009 at 1:17 PM
ုသုမောင် ရဲ့ နဂါးနီ လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျား
sici.carthage | February 18, 2009 at 2:22 AM
Thanks for the link!!! Thanksabunch!
Zaw | February 18, 2009 at 7:11 AM
အဆင်ပြေရင် ကိုအုံ့ကီးရဲ့(သခွပ်ပန်း)သီချင်းလေး
ရချင်ပါတယ်ဗျာ။ ရှိခဲ့ရင် အဆိုတော်နာမည်မေ့နေလို့(အလွမ်းမမ ပန်းမမ) သီချင်းလေးပါ လိုချင်ပါရဲ့ ဗျာ။ ကျနော့်မှာလည်း သီချင်းတော်တော်များ များရှိပါတယ်...
မြတ်ဘုန်းမို | April 8, 2009 at 4:40 PM
ကျွန်တော်လဲ ခောတ်ဟောင်းတေးတွေ စုထားတာရှိပါတယ်။ ၀ါသနာတူသူတွေကိုလဲမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လိုချင်ရင်လဲတောင်းပါနော်။ ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်နားထောင်ချင်နေတာကတော့ ညီတော်မင်းနန်ဆိုတဲ့သီချင်းပါဘဲ။ ကိုထွန်းရွှေဆိုထားတယ်ထင်ပါရဲ့။ ရှိရင်မျှပေးပါဦးနော်
powerman.love | June 13, 2009 at 10:56 AM
ကောင်းပါဗျာ ကောင်းပါ့ အဲလို သီချင်းကောင်းလေးတွေ ကျွန်တော်က လာလည်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ အင့် အင့်
powerman.love | June 13, 2009 at 10:57 AM
Hla | December 11, 2009 at 6:17 AM
အမပဲခေါ်လိုက်မယ်နော်၊ သုမောင်ဆိုထားတဲ့`ချစ်မိုးကြီး' သီချင်းလိုချင်ပါတယ်၊ဖြစ်နိူင်ရင်ပို့ပေးပါနော်၊
aung | December 24, 2009 at 2:03 PM
ကျွန်တော်လည် လာလည်တယ် ..ဒီဆိုက်ကိုယ် အရင်ကရှာတွေ့ ပြီး ဘယ်မှာ ပြန်ရှာရမှန်းနသိလို့ စိတ်ညစ်နေတာ ဗျာ..အခု မှ တွေ့ တော့ တယ်...ကျွန်တော်က မြန်မာသီချင်းကြီး တွေ အပြင် မြန်မာ ဆိုင်းဆရာကြီး
စိန်ဘမောင် ရဲ့စံတော်ချိန်...တီးလုံးလို ချင်ပါတယ်..နောက်ပြီ ညီတော်မင်းနန် သီချင်းလည်း လို ချင်ပါတယ် ခင်မျာ..ကျွန်တော် gtalk က
aung.chan1@gmail.com..ပါ ခင်မျာ..ကျေးဇူး တင်ပါတယ်..ကျွန်တော် အိမ်မှာတော့ သီးချင်းဟောင်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဗျာ..ကျွန်တော်က အခု ရပ်ဝေးမှာ မို့ ပြန်မတင်ပေး နိုင်တာ ကို စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ
မြတ်ဘုန်းမို | December 25, 2009 at 2:51 AM
ကိုအောင်ချမ်းတောင်းထားတဲ့ စံတော်ချိန်တီးလုံးတောင်းထားတဲ့ ပို့ စ်က ကျွန်တော့်မေးလ်ထဲရောက်လာလို့မေးပြန်ပို့ ပေးလိုက်နိုင်တယ်။ အပေါ်ကတောင်းထားတဲ့ သီချင်းတွေလဲ ကျွန်တော့်ဆီတော်တော်များများရှိတယ်။ Blog ပိုင်ရှင်က ပို့ပြီးဖြစ်နေမယ်ထင်လို့ မပို့ တော့ဘူးနော်။ ဘယ်သူမဆို ခေတ်ဟာင်းသီချင်းတွေလိုချင်ရင် ဒီဘလော့ကတဆင့် naiwynn@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
than myint zaw | March 14, 2010 at 5:54 AM
တွိ့တေးသိန်းတန်ရဲ့ ဓါတ်ပြားသီချင်းတွေ လိုချင်ပါတယ်။။egချိန်တဲ့ည။။ရှင်နှောင်း။။လေးနွယ်ect.........
than myint zaw | March 14, 2010 at 6:04 AM
ဖြစ်နိူင်ရင် မောင်မောင်ညွန့်သီးချင်းတွေပို့ပေးပါနော်။။taloke3@gmail.com ဆိုရင်ရပါတယ်။။
မြတ်ဘုန်းမို | March 14, 2010 at 8:31 AM
ကိုသန်းမြင့်ဇော်တောင်းထားတဲ့ သီချင်းတွေပို့ လိုက်ပြီနော်
min | June 2, 2010 at 7:18 PM
ကျွန်တော်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်တောင်းချင်လို့ ပါ..ဘယ်သူဆိုထားတာလည်းတော့ မသိဘူး
မြတ်နိုးသူရယ်..ချစ်မိုးဆွေခဲ့ တယ်.ဘုံကြိုးဖြတ်တဲ့ ဒေဝီနတ်မျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ.စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးနော်..အစ်မလေး...
လားအစ်ကိုလေးလားမသိဘူး..“နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ အစမေ့ နေလို့ ..နောက်မှရေးပို့ ပေးတော့ မယ.်နေ်..
min | June 2, 2010 at 7:20 PM
မေ့ သွားလို့ ..mnkhaa@gmail.com
မြတ်ဖုန်းမို | June 3, 2010 at 1:32 AM
ချစ်မိုးဆွေ သီချင်းကို ပို့ ထားပြီးပါပြီနော်
မြတ်ဖုန်းမို | June 3, 2010 at 1:46 AM
min | September 6, 2010 at 10:41 AM
ကျွန်တော်email.လိပ်စာမှားသါားလို့ ပါ..တောင်ပန်းပါ.mnkhaa54@GMAIL.COMပါခင်ဗျာ..ပြီးတော့ ဆင်းကြီးဂဠုန်ချီသီချင်းလည်းလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.ရှိရင်ပို့ ပေးပါလို့ ..အနေဝေးသွားမှာလွမ်းတက်လာတယ်ဆိုလည်းမှန်ပါ ..လို့ ပြောလည်းခံရတာပေါ့ ..သီချင်းလေးတော့ ပို့ ပေးပါခင်ဗျာ..ကျေးဇူးတင်းပါတယ..်ကိုကြာပီရေ..ကျွန်တော်လည်းမတက်တာကြာပီလို့ ..
bhone | January 25, 2011 at 1:30 PM
သစ်ခွချစ်သူ | August 10, 2011 at 11:58 AM
မျက်နှာများတဲ့ မောင် သီချင်းလေး လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..........ကူညီပေးစေလိုပါတယ်.........009tawtarlay@gmail.com ပါ.....ကျေးဇူးကုဋေကုဋာ ပါပဲခင်ဗျာ.............
DIBBAlankara | August 11, 2011 at 8:20 PM
ဟလို ကိုကြာပီ မင်္ဂလာပါဗျာ
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုကြာပီ ဆီကိုခုလာလည်ဖူးတာပါ လာဖြစ်တာကလဲ ရှာနေတဲ့ ရှေးဟောင်းသီချင်းတွေ မတွေ့လိုပါပဲ အဆိုတော်ကြီး ဗိုလ်ကျော်ရှိန် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
သီချင်းတွေက တော့ ( ဗေဒင်ဆရာ ကျွန်တော်တွေ့ရင် အမြဲ အမြဲ ပစင်ကွယ် မေတ္တာတော် တကယ်ထားလို့ ဆဲဆဲ ဆဲကြပြန်တယ်)လို့ ကျွန်တော်ငယ်ငယ် ၁၄ နှစ် ကနေ ၁၈နှစ်သားထိ နားထောင်းခဲ့ရတယ် ခုတော့ ပျောက်နေပြီ လိုချင်လို့ ရှာ တာ မရဘူး ဗျ ကူညီပါအုံးဗျာ
အဟောင်းဆိုင် | February 5, 2012 at 10:58 AM
Sugar Moon | March 28, 2012 at 8:55 AM
အစ်မ ရေ မြန်မာသံစဉ်တေး (အဆိုမပါ)လိုချင်လို့ပါရှင့်။
yarzarsoe htet | August 8, 2012 at 6:55 AM
kogyi phyo | August 20, 2012 at 7:14 AM
ကြာပီရေမာမာအေးသီချင်းတွေရယ် သုမောင်ရဲ့ဆင်ကြီးဂဠုန်ချီ လိူချင်လုိ့ပါ ပို့ပေးပါနော်
Settpaing Aung | August 21, 2012 at 4:58 PM
ကျွန်တော့်ကို ဆရာရန်နိုင်စိန်ရေးပြီး ဒေါ်မေလှမြိုင်ဆိုသွားတဲ့ ကြွေးကြော်သံ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးရှာပေးပါလားခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအဆိုရှင်ရဲ့ဆိုဟန်ဆိုလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှုတ်ဆက်ပွဲမှာဆိုချင်လို့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Thi Ha | December 12, 2012 at 4:47 PM
မိုးအဖွဲ့သီဆိုထားတဲ့ အဆိုရှင်မမှတ်မိ...ကိုကျော်ညွှန့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...သီချင်းနံမည် " မိုး "
နောက်တစ်ပုဒ် " ဆောင်း " ဖြစ်ပါတယ်...
အဟောင်းဆိုင် | December 13, 2012 at 2:59 AM
မ်ိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား မြန်မာသံစဉ်သီချင်းများ လိုချင်ရင် အောက် ကလင့်ကလေးများ သွားရောက်နားဆင်နိုင်ပြိး လိုသောသီချင်းများကိုလဲတောင်းယူနိုင်ပါသည်
nyi nyi | August 16, 2013 at 5:55 PM
mawaybu | September 7, 2013 at 5:23 AM
Thaw Khant | October 22, 2013 at 7:55 AM
ကြာပီ | March 3, 2014 at 11:52 AM
ခေတ်ဟောင်း သီချင်းတွေ အတော်များများ Facebook မှာ group ဖွဲ့ပြီး တင်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီက ပိုစုံမယ်ထင်ပါတယ်။ နည်းနည်းလောက် ရှာကြည့်လိုက်ကြပါနော်။ စာတွေ မပြန်နိုင်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။
myint soe | March 19, 2014 at 3:53 AM
Unknown | October 2, 2015 at 6:47 PM
ဝင်းဦး ရဲ့.......ထီးတလက်​နဲ့ လူနှစ်​​ယောက်​....သီချင်း​လိုချင်​ပါတ
aprilking 99 | October 2, 2015 at 6:49 PM
Than Dar | November 4, 2015 at 12:53 PM
ဟိုးရှေးခေတ်မြန်မာသံစဉ်သီးချင်းရှိလားမသိဘူးခင်ဗျာ သီးချင်းခေါင်းစဉ်က ဗိုလ်ရှု့သဘင် ပါ ခင်ဗျာ
Than Dar | November 4, 2015 at 1:00 PM
ဟိုးရှေးခေတ်မြန်မာသံစဉ်သီးချင်းရှိလားမသိဘူးခင်ဗျာ သီးချင်းခေါင်းစဉ်က ဗိုလ်ရှု့သဘင် ပါ ခင်ဗျာ ရှိရင်ကျွန်တော့်ကိုပို့ပေးပါလားခင်ဗျာသီချင်းဆိုပြိုင်ရမှာမို့လို့ပါအရေးကြီးလို့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Than Dar | November 4, 2015 at 1:14 PM